MACLUUMAADKA NOOCYADA EEYAHA EE INGIRIISIGA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Mastiff / Rottweiler Mix Nooc Eyda ah
Amiir Ingiriisiga Mastweiler-ka ah markuu jira 3 sano iyo 6 bilood— Wuxuu culeyskiisu ka badan yahay 100 rodol, laakiin waxaan u maleynayaa inuu ugu dambeyn dhameystirmay. Amiir wuxuu inta badan maalmihiisa ku qaataa inuu ila joogo oo uu ceyrsado habaryartayda 2 jirka ah, oo ku adkaysanaysa in Amiirku yahay eeydeeda. '
The English Mastweiler ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Mastiff iyo Rottweiler . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda nooc isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% nadiif ah ilaa 50% saafi ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
'Prince waa 90-lb. Ingiriis Mastiff / Rottweiler mix. Wuxuu ku jiraa qiyaastii 2 sano jir sawirkan wuxuuna jecel yahay inuu xero tago iyo inuu safarro ku aado wabiga aniga iyo qoyskeygaba. Isagu waa isku darka saxda ah eeyga dabeecad macaan iyo ilaaliye aan cabsi lahayn. '
'Tani waa Aries. Iyadu waa Ingiriisi Mastweiler oo kuwani waa sawirro aan ka qaaday markay ahayd 2 1/2 bilood. Iyadu waa gabadh yar oo dib-u-dhac iyo xiise leh oo jecel inay dadkeeda uun la joogto. Waxay leedahay daqiiqado marka qofku u maleeyo inaysan waligeed fariisan karin, abuurista tartan orod oo ka baxsan guriga iyo suufka furitaanka sariirta, si kastaba ha noqotee waqtiyadan si dhakhso leh ayey u gudbaan waxayna soconayaan kaliya hal daqiiqo ama laba, iyada oo aan lagu xusin in ay sii yaraanayaan oo ay sii yaraanayaan sida Aries u koraan oo wax u bartaan. Iyadu waa bukaan socod iyo jaceyl kalgacal u qaba wiilkeena 17-jirka ah waxayna ogaatay halka buskudku ku burburayo, isaga oo raacaya dhammaan guriga oo nadiifinaya isaga kadib. Aries waa eey cunto wadata, in kasta oo ay jeceshahay alaabta ay ku ciyaaraan haddana iyadu ma aha eey wax iska leh marka ay timaaddo ama waxyaabaha ay caruurtu ku ciyaaraan ama cuntada. Waxaan ogaaday in Aries, in kasta oo ay madax adag tahay, ay tahay deg deg waxbarte iyo inay si wanaagsan ula falgasho a deganaan iyo kalsooni sayid . Waxay jeceshahay inay lasocoto qoyska waxayna si fiican ulashaqeysaa eeyaha kale. Waad ku mahadsan tahay xanaano-maalmeedka ey-keeda xirfaddeeda bulsheed ayaa si cajiib leh u soo socota Weli waxaan haysannaa shaqo aan ku qabanno iyada laakiin guud ahaan Aires waa eey si wanaagsan isu dheellitiran oo ku habboon qoyska. '
Racket the Mastiff x Rottweiler mix breed (Ingiriisiga Mastweiler) ee 2 sano jir ah— 'Racket wuxuu ka yimid barnaamij taran taxaddar leh loo qorsheeyay. Koox breedham ah oo ku nool Birmingham, UK, waxay ahaayeen ey eey u tarmayaan ciidanka, booliska iyo shaqada amniga. Waxaan u maleynayaa in kani uu ahaa jiilkoodii seddexaad ee eeyo ah oo ka soo jeeda Ingiriiska Mastiff x Rottweiler. Rotties-yadu way yaraayeen, Jarmal-bay ahaayeen oo si heer sare ah ayaa loo tababaray. Racket waa jiilka saddexaad ama afraad ee iskutallaabta illaa iyo inta aan ka soo ururin karo soosaarahu wuxuu lahaa diiwaanno aad u wanaagsan oo wuxuu i tusay sawirro xubnaha qoysaska ah oo aan ku sugnayn aqalkiisa. Ujeeddadoodu waxay ahayd inay soosaaraan eey u muuqday Mastiff yar laakiin aad ugu habboonaa nolosha shaqada, labadaba dhinaca caafimaadka iyo dabeecadda. Mid baa jira Neapolitan Mastiff taariikhdeeda - awoowe weyn ayaan aaminsanahay, ama laga yaabee awoowe weyn - oo waa la isticmaali lahaa halkii Ingiriis Mastiff ah. Neefsaduhu wuxuu ku tilmaamay inay yihiin 'Mastiff x Rottweiler' sababtaas darteed, laakiin waxaan isaga la xaqiijiyey in dhammaan Mastiffyada kale ee la isticmaalay ay ahaayeen mastireyaal Ingiriis ah, ee aysan ahayn Bullmastiffs iwm. Hooyadeed iyo aabbaheedba waxay ahaayeen Mastweilers, oo awowgeedna wuxuu ahaa Rottie. Bixiyeyaashu waxay isku dayayeen inay ilaaliyaan isku-darka 50:50 ee jiilalka. Waxay jaangooyeen midabbada - ardaydu dhammaantood waxay ku soo baxayeen meel madow, fawn ama casaan - nuucaasina wuxuu u muuqday mid aad u eg, laakiin waxaa jiray qaddar aad u weyn oo xagga qashinka ah dhammaan ardeydu waxay u muuqdeen kuwo caafimaad qaba laakiin, ugu yaraan 12 pups, laba lab ayaa aad uga weynaa kuwa kale.
In kasta oo taariikhdeeda adag, Racket waa gabar qurux badan. Aad ayey u faraxsan tahay, oo 2 jir ah, wali waxay u maleyneysaa inay tahay eey la jeclaan karo. Iyadu waa feejignaan-doone, dooneysa inay ka farxiso, caashaqdo carruurta. Iyadu waa qof saaxiibtinimo leh marka dadka loo soo bandhigo, laakiin waa eey digtoon oo digtooni leh. Iyadu way i difaacdaa oo hortayda ayay istaagtaa, haasaawaha kor loo taagay, haddii ay u malaynayso inay jirto khatar. Haddii ay maqasho xanaaq, codad kor loo qaaday ka dib way feejignaanaysaa waxayna bilaabeysaa inay ilaaliso. Waxaa lagu soo barbaariyey Ingiriiskeena Bull Terrier wayna isjecelyihiin, in kasta oo ay iyaguna ku raaxaystaan ​​ciyaar adag. Waxay taagan tahay qiyaastii 25 '(64 cm) oo garabka ah culeyskeeduna wuxuu ka badan yahay 110 rodol. (50 kg). '
Racket the English Mastiff x Rottweiler mix breed dog (Ingiriisi Mastweiler) 2 sano jir
Abby the English Mastweiler oo 1 jir ah iyo 90 rodol— 'Aabeheed waa Rottweiler daahir ah hooyadeedna waa Mastiff nadiif ah.'
Mae the English Mastweiler at 9 bilood jir— 'Hooyadeed waa Ingiriis daahir ah oo Mastiff ah oo culeyskiisu ka badnaa 110 rodol. aabbeheedna waa Rottweiler Jarmal ah oo culeyskiisu ka badan yahay 100 rodol. Hadda markay jirsatay waxay durba tahay dhererka Rottie cabirkiisu caadi yahay laakiin wali waxay u baahan tahay inay xoogaa buuxiso. Iyadu waa eey aad u macaan oo wada jilif ah. '
Napoleon oo ah Mastweiler-ka Ingiriisiga ah ee 8 bilood jira ayaa laga soocay haween Mastiff ah iyo Rottweiler lab ah.
Ingiriisiga Mastweilers Jazzy (bidix), iyo Napoleon (midig) markay jiraan 6 bilood ayaa laga soocay Mastiff dumar iyo Rottweiler lab ah.
Ingiriisiga 'Mastweiler puppy' oo ah 5 toddobaad jir— Inbadan oo eeydan ah waxaan aragnay inay dib udhaceen sidii Mastiff, laakiin waxay jecel yihiin inay kacaan oo ay u ciyaaraan sida Rottweiler. Eydan waxay ka yimaadeen dhedig Mastiff ah iyo Rottweiler lab ah. '
madow iyo caddaan sternard
boston terrier bulldog mix puppy ey
Muxuu eeygaygu u kaadiyaa markaan salaaxayo
isku darka akita iyo adhijirka Jarmalka
madow iyo tan isku darka Pit
iskuduwaha isbaanishka isbaanishka australia